၀ ဘ်ဆိုဒ်များသည်သူတို့၏ visitors ည့်သည်အရေအတွက်ကိုဘယ်လောက်အထိအလွန်အကျွံဖော်ပြသလဲ။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 7, 2007 စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 6, 2018 Douglas Karr
ComScore ရုံက၎င်း၏ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ကွတ်ကီးဖျက်မှုအပေါ်အဖြူရောင်စက္ကူ။ ကွတ်ကီးများသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ analyticsနှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကူညီပေးဖို့။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင် site တစ်ခုပေါ်တွင်သင်၏ login အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန် box တစ်ခုကို check လုပ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည် cookie ထဲ၌သိမ်းဆည်းပြီးနောက်စာမျက်နှာဖွင့်သောအခါနောက်သို့ဝင်ရောက်သည်။
ထူးခြားတဲ့ visit ည့်သည်ကဘာလဲ?
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၊ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာက cookie တစ်ခုစီတိုင်းကိုသတ်မှတ်တိုင်း visit ည့်သည်အသစ်အနေနှင့်မှတ်သားသည်။ မင်းပြန်လာတဲ့အခါမင်းအဲဒီမှာရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားချက်အားနည်းချက်တွေကိုရှိပါတယ်:
အသုံးပြုသူများသည် Cookies များကိုသင်ဖျက်သည်။ သင်ထင်သည်ထက်အများကြီးပိုပါသည်။
တူညီသောသုံးစွဲသူသည်ကွန်ပြူတာများစွာ (သို့) ဘရောင်ဇာများမှဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်သို့ဝင်ရောက်သည်။
ဒေသဆိုင်ရာသတင်းဆိုက်များသည်ဤကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ကြော်ငြာရှင်များကိုငွေကောက်နိုင်သည်။ တကယ်တော့ဒေသခံ Indianapolis သတင်းစာက,
IndyStar.com သတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်အင်ဒီယားနား၏နံပါတ် ၁ အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီးစာမျက်နှာကြည့်ရှုသူသန်း ၃၀ ကျော်ရှိသည်။ ၂.၄ သန်းထူးခြားသော visitors ည့်သည်များ နှင့် 4.7 သန်းတစ်လလည်ပတ်။
ဒီတော့ cookie ကိုဖျက်ခြင်းက skew နံပါတ်များဘယ်လောက်ကျမလဲ။
လေ့လာမှု၏ရလဒ်များအရအမေရိကန်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်တစ်လအတွင်း (သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်ရှင်းလင်းထားခြင်း) သည်၎င်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးပါတီ၏ cookies များကိုပျမ်းမျှ ၄.၇ ကွဲပြားခြားနားသော cookies များကိုအသုံးပြုသူကဏ္ segment အတွင်းရှိ site တစ်ခုတည်းအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိရသည်ဟုဖော်ပြသည် ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Belden Associates၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် JupiterResearch နှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Nielsen / NetRatings တို့မှကောက်ယူခဲ့သောလွတ်လပ်သောလေ့လာမှုများအရတစ်လအတွင်းအင်တာနက်အသုံးပြုသူအနည်းဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းက cookies များကိုဖျက်ပစ်သည်။
comScore US home နမူနာကိုအခြေခံအဖြစ် အသုံးပြု၍ Yahoo အတွက်ကွန်ပျူတာတစ်ခုလျှင်ပျမ်းမျှ ၂.၅ ကွဲပြားသော cookies များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီတွေ့ရှိချက်က cookie ကိုဖျက်ခြင်းကြောင့် site-visitor base ၏အရွယ်အစားကိုတိုင်းတာရန် cookies များကိုအသုံးပြုသော server ဗဟိုပြုတိုင်းတာခြင်းစနစ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ထူးခြားသော visitors ည့်သည်အရေအတွက်ကို ၂.၅x အထိတိုးလာလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ အထိ 2.5 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခု overstatement ။ အလားတူစွာ၊ လေ့လာမှုအရအွန်လိုင်းကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ရောက်ရှိမှုနှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုခြေရာခံရန် cookies များကိုသုံးသောကြော်ငြာဆာဗာစနစ်သည် ၂.၆ ဆအထိအချက်တစ်ချက်နှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုတူညီသောအတိုင်းအတာအထိလျှော့ချနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အလွန်အမင်းဖော်ပြသည့်ပမာဏ၏ပမာဏသည်ဆိုက်သို့အလည်အပတ်ရောက်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်ကင်ပိန်းနှင့်ထိတွေ့မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဖြစ်နိုင်စရာ! ဒေသခံသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကဲ့သို့သော site တစ်ခုကိုယူပါ။ ထိုအရေအတွက်သည် ၂.၄ သန်းသည် visitors ည့်သည်တစ်သန်းအောက်ရောက်သွားသည်။ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဆိုသည်မှာမကြာခဏ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုရသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပြီးထိုနံပါတ်သည်ထိုထက်အောက်သာလွန်နိုင်သည်။ ယခုဆိုလျှင်အိမ်တွင်နှင့်အလုပ်ခွင်သို့ ၀ င်ရောက်လာသောစာဖတ်သူအရေအတွက်ကိုထည့်ပါ၊ သင်သည်ထိုနံပါတ်ကိုအခြားသိသာထင်ရှားသည့်ပမာဏကိုကျဆင်းသွားစေသည်။
၎င်းသည် 'မျက်ခုံးဟောင်းအစုအဝေး' အတွက်ပြisနာဖြစ်သည်။ အရောင်းစာရေးများသည်နံပါတ်များဖြင့်အမြဲရောင်းလေ့ရှိသော်လည်းသူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်မီဒီယာများထက် visitors ည့်သည်အရေအတွက်နည်းပါးလာနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ပြ'နာကို "ဖြေရှင်းရန်" ကိုမှန်ကန်နည်းလမ်းမရှိ။ ဦး နှောက်တစ်ဝက်ပါသောမည်သည့် ၀ က်ဘ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကဤကဲ့သို့သောအရာဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို၎င်းတို့၏နံပါတ်များကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအလွန်အကျွံဖော်ပြနေသည်ဟုမပြောပါ။ သူတို့ဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုမဖော်ပြကြပါဘူး။ အလွန်စိတ်မချရသောစာရင်းအင်းများ။
မည်သည့်ကောင်းမွန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်နှင့်မဆိုမျက်လုံးအရေအတွက်ကိုမဟုတ်ဘဲရလဒ်များကိုသာအာရုံစိုက်ပါ။ မင်းဆိုရင် များမှာ မီဒီယာအမျိုးအစားများအကြားနှုန်းထားများကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်, သင်ကနံပါတ်များကိုအနည်းငယ်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျထို့ကြောင့်အမြန်သင်္ချာလျှောက်ထားရန်လိုပေမည်!
Tags: ကြော်ငြာနံပါတ်များကြော်ငြာကြော်ငြာအရေအတွက်ကလူကွတ်ကီးဖျက်မှုof ည့်သည်အရေအတွက်
WordPress တွင်အမျိုးအစားများဆွဲရန်အတွက် MySQL ရှာဖွေမှု
ဇွန်လ 8 ရက် 2007 ခုနှစ် နံနက် 1 နာရီ 48 မိနစ်
နောင်တွင် CardSpace ၏လိုင်းများတစ်လျှောက် တစ်စုံတစ်ရာသည် ဤပြဿနာကို လင်းလက်တောက်ပလာမည်ဖြစ်သည်။ ဒါတောင် အစ်ကိုကြီး ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ငါတို့ စောင့်ပြီး ကြည့်ရလိမ့်မယ်။
ဇွန်လ 8 ရက် 2007 ခုနှစ် နံနက် 8 နာရီ 32 မိနစ်
သင်ပြောသည်မှာ၊ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ ထူးခြားသောဧည့်သည်များကို ဆုံးဖြတ်ရန် တိကျသောနည်းလမ်းမရှိပါ။
ကွတ်ကီးများသည် စိတ်မချရသဖြင့် ယခုအခါ လူများစွာသည် ကလိုင်းယင့်ဘေးထွက် သိုလှောင်မှုအတွက် flash ကို အသုံးပြုနေကြပါသည်။
ဒါပေမယ့် ကြော်ငြာရှင်တွေအတွက်တော့ စာမျက်နှာကြည့်ဖို့က အရေးကြီးတယ်။ ကြော်ငြာတစ်ခုပြသသည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကို တိကျစွာဆုံးဖြတ်ရန် လွယ်ကူသည်။
ထို့နောက်၊ ဝဘ်စာရင်းအင်းဝန်ဆောင်မှုများစွာတွင် ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာရှိသည်။ statcounter ကဲ့သို့သော တိုက်ရိုက်စာရင်းအင်းဆိုက်သည် တစ်ကြိမ်လျှင် အသုံးပြုသူအရေအတွက် အကန့်အသတ်ဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်သည်။
google analytics က ဒီအတွက် အများကြီး ပိုကောင်းပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာရဖို့အတွက် ၂ ရက်လောက် စောင့်ရတယ် 🙁
ဇွန် 9, 2007 မှာ 4: 00 pm တွင်
"Yahoo အတွက် ကွန်ပြူတာတစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှ ကွဲပြားသော ကွတ်ကီး ၂.၅ ခုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။"
အိမ်သုံးကွန်ပြူတာတစ်ခုလျှင် Yahoo အသုံးပြုသူမည်မျှရှိသနည်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၂ ၊ ၃ ဝန်းကျင်လောက်မှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါ့မိန်းမကို အမြဲတမ်း လော့ဂ်ချထားတယ်ဆိုတာ ငါသိတယ် ဒါကြောင့် Yahoo ဒါမှမဟုတ် Google၊ Schwab ဒါမှမဟုတ် တခြားဆိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါ့အကောင့်ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ4ဦးကြားတွင် PC2လုံးနှင့် Mac တစ်လုံး ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် သင့်တွင် ကွန်ပျူတာတစ်လုံး သို့မဟုတ် အများအပြားရှိသည်ဖြစ်စေ ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်တွင် reg ဆိုက်တစ်ခုရှိပြီး သင့်ဆာဗာမှတ်တမ်းများ အဆင်ပြေပါက IP လိပ်စာတစ်ခုစီအတွက် အမည်များကို အစီရင်ခံစာတစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ (၎င်းက ကွန်ပျူတာများကို မျှဝေသူမည်မျှရှိသည်/ dup အကောင့်များရှိသည်ကို ပြသသည်)။ ထို့နောက် နာမည်တစ်ခုစီတွင် IP မည်မျှပေါ်လာကြောင်းပြသသည့် အစီရင်ခံစာတစ်ခုကို ပြုလုပ်ပါ။ (ဒါက a) ips ကို isps မှ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး b) အသုံးပြုသူများသည် အများအပြားတည်နေရာများမှ login ဝင်ရောက်သည်ကိုပြသသည်။ )
ဟုတ်တယ်၊ 2.5 ဂဏန်းက မှန်တယ်။ လိမ်ညာခြင်းမဟုတ်၊ အလွန်အကျွံမဖော်ပြဘဲ၊ မှန်ပါသည်။ ဒီမှာ ဇာတ်လမ်းမရှိဘူး။ အခုပဲ လျှောက်လိုက်ပါ။
ဇွန် 9, 2007 မှာ 4: 25 pm တွင်
ရေးထားသော ဆောင်းပါးသည် ကွတ်ကီးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကောင့်ဝင်/ထွက်ခြင်း ပြဿနာများကို မဆွေးနွေးဘဲ၊ ကွတ်ကီးအကြောင်း ပြောနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖျက်သည် ထူးခြားသောစာမျက်နှာကြည့်ရှုမှုများအပေါ်၎င်း၏သက်ရောက်မှု။ Yahoo! သင်ထွက်ပြီး အကောင့်ဝင်သည့်အခါ ကွက်ကီးများကို မဖျက်ပါ။
ပြဿနာမှာ အိမ်ထောင်စုများ၏ 30% ကျော်သည် ၎င်းတို့၏ ကွတ်ကီးများကို ဖျက်လိုက်သောကြောင့် သင်သည် ဧည့်သည်အသစ်အဖြစ် ရှုမြင်ခံရသည်... အိမ်တွင်းရှိ အခြားတစ်ဦးမဟုတ်ပေ။ ပိုမိုလေးနက်သော ရှင်းလင်းချက်အတွက် ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပါ။
သင့်ဥပမာသည် စက်များစွာမှ တူညီသောဆိုက်ကို လူများစွာဝင်ကြည့်ခြင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ4ဦးကြားရှိ PC2လုံးနှင့် Mac တစ်လုံးဖြင့် စက်အားလုံးတွင် တူညီသောဆိုက်ကို ဝင်ကြည့်ပါက5မဟုတ်ဘဲ 'ထူးခြားသောဧည့်သည်' 2.5 ဦးအထိ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် လူဦးရေ၏ 30%+ ကဲ့သို့ ကွတ်ကီးများကို ပုံမှန်ဖျက်နေပါက၊ ၎င်းသည် ထူးခြားသောလာရောက်သူ 12.5 ကျော်အထိ ဖြစ်သွားသည်။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုလို့ ကျွန်တော် မယုံပါဘူး... ဒါပေမယ့် လွန်လွန်ကဲကဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ သင့်အိမ်ထောင်စုက သက်သေပြတယ်။
ဇွန် 9, 2007 မှာ 11: 22 pm တွင်
ဆောင်းပါးကို ပြန်ဖတ်ပြီး မင်းရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို ထပ်ပြီး…သင်မှန်ပါတယ်။ မင်းရဲ့အချက်ကို ငါက နဂိုက အထင်လွဲခဲ့တယ်။ ရှင်းလင်းပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဂေါတမသည် မှန်သည်- flash cookies များကို flash ရန် အခြားအကြောင်းပြချက်မရှိသည့်တိုင် လူများသည် flash cookies များကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။ ညစ်ပတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်- သင့်ဖလက်ရှ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ကွတ်ကီးများကို (အလွယ်တကူ) ဖျက်၍မရပါ။
(Google သည် flash များများစားစားမရှိပါ။ DoubleClick လုပ်သည်...)
ဝဘ်ဆိုက်များသည် ကြော်ငြာရှင်များထံ သန့်ရှင်းစေလိုပါက၊ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်အရာဝတ္ထုကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်ကြည့်ရှုခဲ့သည်၊ မည်သည့်အချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
မှတ်တမ်းဖိုင်တွေက အဲဒါကို ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ဒေတာဘေ့စ်ထဲမှာ ဒေတာအများကြီး လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အလွန်ကြီးမားသောဒေတာဘေ့စ်။
အဲဒါက မကြာခင်မှာ ဖြစ်လာတော့မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက်၊ မင်းပြောသလိုပဲ အကောင်းဆုံး စိတ်ကူးက ရလဒ်တွေကို အာရုံစိုက်ဖို့ပါပဲ။